सिरिया युद्ध : शक्ति राष्ट्रको हतियार परीक्षण केन्द्र
Sun, Oct 17, 2021 | 10:03:47 NST
Posted: Saturday, Apr 14, 2018 19:58 PM (4years ago )
वैशाख १ – सिरियामा फेरि शक्ति राष्ट्रको आक्रमण सुरु भएको छ । पछिल्लो समय सिरियामा भएको रसायनिक आक्रमणपछि पश्चिमी देशहरुले जवाफी कारवाही गरेको जनाएका छन् ।
सिरियाली राष्ट्रपति असदको प्रतिक्रिया
बेलायती प्रधानमन्त्री मे लाई विपक्षी दलका नेताको प्रश्न आक्रमणको कानुनी आधार के छ ?
आक्रमण आवश्यक थियो : बेलायती प्रधानमन्त्री मे
ओपीसीडब्लूले भन्यो अनुसन्धान बाँकी थियो
इजरायलले जोर्डन नदीको १ हजार ८ सय मिटर वर्ग किलोमिटरमा हवाई उडान बन्द गरेको छ । सिरियामा भएको आक्रमणलाई लक्षित गर्दै इजरायलले अप्रिलको अन्तिमसम्म हवाई उडान बन्द हुने जनाएको छ ।
फ्रान्सले गएको हप्ता सिरियामा भएको आक्रमणमा सिरिया सरकारले रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेको र त्यसका लागि सर्वसाधारणबाट आएका जानकारीलाई अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
पश्चिमी आक्रमण कमजोर
यसरी सुरु भयो सिरिया युद्ध
आउँदो मार्च १५ मा सिरियाको गृहयुद्ध सुरु भएको ८ वर्ष पुग्छ । अहिलेसम्म ४ लाख ६५ हजारभन्दा धेरै सिरियाली नागरिक युद्धमा मारिएका छन् । करोडौं नागरिक अंग–भंग भएर बाँच्न बाध्य छन् ।
कयौं बलात्कारको शिकार भएका छन् भने कयौं बालबालिका अभिभावकविहीन बन्न पुगेका छन् । हजारौं नागरिक अन्य देशमा शरण लिएर बस्न बाध्य भएका छन् । सिरियाले आधाभन्दा बढी नागरिक युद्धमा गुमाइसकेको छ ।
के ले चर्कायो सिरिया युद्ध ?
रुस र अमेरिका
रुसको संलग्नता :
रुसले बसर अल असदलाई सघाउन सैनिक सल्लाहाकार नै तैनाथ गर्यो । त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रसंघमा पश्चिमी देशहरुको प्रस्तावविरुद्ध रुस र चीनले भिटो नै प्रयोग गरे ।
सन् २०१८ अप्रिलमा अमेरिकाले फ्रान्स र बेलायतसँगै मिलेर सिरियाको सरकारविरोधी समूहको बर्चश्व रहेको स्थान दोमामा रासायनिक आक्रमण भएको भन्दै जवाफी आक्रमण गरे ।
जेनेभा : सिरियाको सरकार र विपक्षीबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा सन् २०१२ मा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा पहिलो शान्ति वार्ता भएको थियो । सन् २०१७ को डिसेम्बमा भएको वार्ता पनि निश्कर्षविहीन भएको थियो ।
फ्रि सिरियन आर्मी : सन् २०११ मा स्थापना गरिएको अमेरिका, टर्की र अरु खाडी देशहरुको सहयोग रहेको ‘फ्रि सिरियन आर्मी’ पछिसम्म सशक्त भएर काम गर्न सकेन् । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा सरकार पक्षका सैन्य समूहलाई अलेप्पोमा पराजित गर्नु ‘फ्रि सिरियन आर्मी’ले सबैभन्दा ठूलो सफलता थियो । त्यसपछि उसले उत्तर पश्चिम सिरियाका केही ठाउँमा मात्रै कब्जा गरेको थियो ।
सिरियाका नागरिक विभाजनमा शक्तिराष्ट्रको भूमिका
शक्तिराष्ट्रकै आडमा सिरियाका सुन्नी, सिया र कुर्द विभाजित छन् । ती सम्प्रदाय एकअर्काका विरुद्ध लड्दै आएका छन् । सत्ता वा विद्रोहीलाई सघाउने नाममा सिरियामा कहिले रसिया, कहिले टर्की त कहिले अमेरिकाले बम खसाइरहेका छन् । त्यसको निशानामा परेका छन् सिरियाली नागरिक ।
आदिमकालमा मानव बस्ती बसेका स्थानमध्ये सिरियाको दमास्कस मात्र त्यस्तो स्थान हो, जहाँ आजसम्म पनि मानव बस्तीले निरन्तरता पाएको छ । तर शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्ना आणविक हतियार परीक्षण गर्ने थलो बनाएपछि सिरिया नरसंहारले सिंगो मानव सभ्यताको नै खिल्ली उडाइरहेको छ ।
सम्प्रदायीक स्वार्थमा आन्दोलन
अहिलेको सिरियाको आन्दोलनमा आआफ्ना उद्देश्य र स्वार्थ भएका समूह र देशहरू पनि संलग्न भएका कारण सिरियाको गृहयुद्धमा निर्दोश नागरिकले त्यसै ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्को पाटो सिरियाको युद्ध अन्त्य गर्न सरकार र विपक्षीको सहमतिले मात्रै सम्भव देखिँदैन ।
धार्मिक सम्प्रदायमा एक–अर्काबीच घृणाको भाव जागेको छ । त्यस्तो विभाजनले दुवै पक्षबाट अत्याचार हुने गरेको र अशान्ति बढेको छ।